My Blue Sky | Home – Somali
Haddii lagugu khasbay guur ama aad ka welwelsan tahay in lagugu khasbo guur, fadlan ogsoonow in aad helli karto caawimo oo aadan kelidaa ahayn. Waxaa laga yaabaa inaad baqayso oo aadan hubin mustaqbilkaaga, uuna kugu jiro dareen iyo ka fekerka mustaqbilka. Waxaad helli kartaa caawimo adiga oo la xiriiraya mid ka mid ah namabarada ku yaalla boggaan.
Macna ma samaynayso da’da; asal ahaan halkaad ka timid; inaad tahay nin ama naag – qofna looma ogola in uu kugu khasbo inaad guursato adiga oo aan doonayn.
Kala soo bax macluumaadka ku saabsan guurka khasabka ah hoos:
Su’aallaha badanaa la isweydiiyo oo luqada badan ku qoran kuna saabsan guurka khasabka ah
Qoraalka Qorshaha Aminiga
Haddii aad u baahan tahay talo, waxaad wici kartaa
(02) 9514 8115 ama email u dir help@mybluesky.org.au ama qoraal gaaban u soo dir 0481 070 844. Waxaan kaa caawin karaa mutarjum haddii aad u baahan tahay.
Dareenka amni la’aanta? Haddii ay jirto xaallad degdeg ahi ama wax lagu yeello waxaad ka wici kartaa saddex-eber (000) telefoonkaga.